WordPress: Wedzera Pamusoro Meseji Bar | Martech Zone
WordPress: Wedzera Pamusoro Meseji Bar
Svondo, November 27, 2011 Muvhuro, Mbudzi 28, 2011 Douglas Karr
Nesaiti nyowani, ndanga ndichitsvaga a top bar yeWordPress kwenguva yakati rebei. Yedu yekupedzisira theme dhizaini yaive iine chikamu chese chinogona kudhonzwa pasi icho chakashambadza yedu email kunyoresa. Izvi zvakawedzera huwandu hwevanyori zvakanyanya zvakanyanya zvekuti ini ndakabatanidza munda wekunyorera wakanangana nemusoro wetiyo.
Zvino ini ndaingoda a top bar kuchengetedza vaverengi kuenderana nenguva pane chero akakosha mameseji ataida kuvayeuchidza nezve… kusanganisira nhau uye zviitiko. Ini ndanga ndichizonyora izvi zvakananga mudingindira redu asi zvikawanikwa WP-Topbar, yakanyorwa zvakanaka bar yepamusoro yeWordPress. Paive nevamwe vamwe kunze uko vane zvimwe zvinhu… sekutenderera mameseji kana kuronga meseji, asi kureruka kweplagin iyi kwakavakunda.
Ndakaonga kuti iyo yepamusoro bar haina kunyorwa yakanyorwa pamusoro peji yezvinyorwa; pachinzvimbo, inogadzirwa zvine simba uye inowoneka ine marongero anosanganisira kunonoka uye kumhanya kwekuratidza ... kubata kwakanaka! Iwe unogona kudzora iwo mavara (uye kunyangwe mufananidzo wepashure) webhawa, meseji, wedzera chinongedzo, uye kunyange shandisa yako wega CSS kwazviri. Iwo manejimendi zvakare ane preview kuti iwe ugone kuongorora ese ako shanduko usati waisa kurarama.
Tarira, kune mamwe epamusoro mabhawa plugins ari pamusika ari kuchaja mari… asi ini ndinofunga iyi inokosha kupfuura!
UPDATE: Ini ndakaita kumwe kugadziridza kune iyo plugin. Ikozvino kurodha kubva wp_footer pane wp_head (ndiyo WordPress API talk) uye ini ndakagadzirisa iyo div kuti ndive neID uye dhizaini yekugadzirisa iyo bar pane kuti ive nehama. Nenzira iyi, iyo bar inogara yakaiswa iwe uchitsvaga pasi peji.
Tags: bhawa remashokomeseji bar plugintoolbartop bartop bar pluginWordpress pluginWordpress yepamusoro barwp_footerwp_musoro
2011 Cyber ​​Muvhuro Infographic
Slideshare - Yakanyarara Giant Yezviri Kushambadzira
Mbudzi 27, 2011 na7: 10 PM
Mbudzi 27, 2011 na7: 40 PM
Iwe unotengesa, George!
Dec 11, 2011 pa 1: 18 AM
Wepamusoro meseji bhawa chaizvo pops.
Dec 11, 2011 pa 1: 45 AM
Mar 21, 2012 pa 10: 17 PM
Ndakaedza yako link asi iyo plugin haisisipo. Ndingawane kupi Karr?
Sep 7, 2012 pa 8: 51 AM
Nei izvi zvisiri kundishandira? Ndakaedza iyi plugin mimwe mwedzi mitanhatu yadarika uye ndakatadza kuziva kuti sei. Iyo yakaiswa mushe uye ini ndakakwanisa masystem nenzira kwayo ini ndinofunga asi hazviratidzike pane peji rekumba kana pane iyo peji id ini yandakamisa iyo. Iye zvino zvakanditorera anopfuura awa kuti ndiite kuti ishande. Ndaguta. Mumwe munhu anobatsira!
Ya ini ndakamisa nguva nenzira futi. (mune millisecods) uye zuva zvakare. Chii chandinosuwa manje?
Sep 7, 2012 pa 9: 26 AM
Zvichida imwe mhando yekunetsana neimwe plugin? Unogona kuedza kuremadza ese plugins uye nekumhanya chete iyoyo kuti uone zvinoitika.
Mar 19, 2013 pa 1: 03 AM
Ya zvakashanda mushure mekuyedza zvinhu zvakawanda. Izvi zvakagadzirisa - kugadzirisa patsva. Iyo yazvino vhezheni inoshanda pasina dambudziko
Mbudzi 26, 2012 na5: 41 PM
Kutenda mugove, izvo zvandaitsvaga.
Gumiguru 21, 2013 na5: 08 PM
Kutenda nekutumira kukuru. Ini ndanga ndichitsvaga chaizvo izvi. Nekudaro ini ndanga ndichitsvaga imwe "hello bar" imwe uye hapana yaiita kunge yaindishandira. Kutenda neichi chinonzwisisika posvo.